တရုတ် Flange ဆက်သွယ်မှုပံ့ပိုးပေးသူနှင့်စက်ရုံ | Zhaofeng
FRP ပိုက် fittings ၏အားသာချက်များ:
1. ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိရှိပြီးအပူနှင့်လျှပ်စစ် insulator တစ်ခုဖြစ်သည်။
၂။ ဓာတုချေးခံနိုင်ရည်၊ ကြာရှည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ FRP သည်ပြွန်အသစ်၏ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။
စည်ပင်အင်ဂျင်နီယာ-ရေပေးဝေရေးအင်ဂျင်နီယာ၊ ရေနုတ်မြောင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ မိုးရေအင်ဂျင်နီယာ၊
စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေထိန်းသိမ်းမှု-စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့်ရေထိန်းသိမ်းမှုဆည်မြောင်း၊
FRP ပိုက် fittings ၏စွမ်းဆောင်ရည်ဝိသေသလက္ခဏာများ:
၁။ FRP ပိုက်တပ်ဆင်မှုတွင်အလွန်ကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိရှိသည်၊ FRP ပိုက်၏ဆွဲအားသည် ၁.၈-၂.၁ ဖြစ်သည်၊ မြင့်မားသောခွန်အား၊ FRP ပိုက်၏အလေးချိန်သည်ပေါ့ပါးသည်၊ ရုပ်ပိုင်းနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ထို့အပြင် FRP ပိုက်၏ချဲ့ထွင်မှုသည်သံမဏိနှင့်အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်ညီမျှပြီးအပူစီးကူးမှုလည်းနည်းသည်။ ကောင်းသောအပူနှင့်လျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းရှိသည်။
၂. ဖန်သံမဏိပိုက်များသည်ဓာတုချေးများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတာရှည် ၀ န်ဆောင်မှုရှိသည်၊ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောအက်ဆစ်များ၊ အယ်ကာလီများ၊ ဆားများနှင့်အော်ဂဲနစ်အရည်ပျော်များနှင့်အခြားကွဲပြားသောမီဒီယာများသို့ပို့ဆောင်ရန်သင့်တော်သည်။
၃။ FRP ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၏ဟိုက်ဒရောလစ်ဂုဏ်သတ္တိများသည် FRP ပိုက်၏အရေးကြီးသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဟိုက်ဒရောလစ်လက္ခဏာများသည်အရည်ခေါင်းဆုံးရှုံးမှုသည်သေးငယ်သည်၊ ပိုက်အချင်းသေးငယ်ခြင်း (သို့) ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးသောစုပ်အားကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ပိုက်လိုင်းအင်ဂျင်နီယာ၏ကန ဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုလျှော့ချခြင်း၊ ပါဝါချွေတာခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ FRP ၏အတွင်းမျက်နှာပြင်သည်အတော်လေးချောမွေ့သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုသည် ၀.၀၀၈ ဖြစ်နိုင်သည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်စဉ်အတွင်းသံမဏိပိုက်၏အတွင်းမျက်နှာပြင်၊ သံတံပိုက်များ၊ ဘိလပ်မြေပိုက်များစသည်တို့သည်မကြာခဏသံချေးတက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကြမ်းတမ်းလာသည်၊ ဖန်မျှင်အားဖြည့်ပလတ်စတစ်သည်ပြွန်အသစ်၏ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုအမြဲထိန်းသိမ်းထားသည်။
၄။ FRP ပိုက်ဆက်ကြောင်းများတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းစရိတ်သည်နည်းသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် FRP ပိုက်သည်အထူးဆန့်ကျင်ကာကွယ်မှုမလိုအပ်ပါ။ အပိုဆောင်းကာကွယ်မှုမပါဘဲ insulating layer ကိုပါးလွှာစေနိုင်သည်။ ပိုက်လိုင်းသည်အတော်လေးပေါ့ပါးသည်၊ ဓာတ်လှေကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတန်ချိန်သည်သေးငယ်ပြီးဓာတ်အားသုံးစွဲမှုလည်းနည်းသည်။
၅။ ဖန်သံမဏိပိုက်တပ်ဆင်မှုများ၏ဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုသည်ကြီးမားပြီးပြုပြင်မွမ်းမံမှုမှာတိုတောင်းသည်။ FRP ကိုအစေး matrix နှင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအမျှင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော reinforced material ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ ဒဏ်ရာဖြစ်စဉ်ကိုအခြေအနေအတိအကျအရအမာခံပုံစံခွက်တစ်ခုနှင့်အလွှာလိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။ ပြွန်နံရံသည်အစေးစနစ်အားပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ကွဲပြားသောအားဖြည့်ပစ္စည်းများကို သုံး၍ FRP ပိုက်များ၏မတူညီသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများကိုချိန်ညှိရန်ကွဲပြားခြားနားသောဖိအားများနှင့် FRP ပိုက်များကိုမတူညီသောမီဒီယာအဆင့်အတန်းများနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲရန်အသုံးပြုသည်။ သို့မဟုတ်အချို့သောအထူးဂုဏ်သတ္တိများနှင့် တိုတောင်းသောပြုပြင်မွမ်းမံသည့်ကာလသည် isotropic သတ္တုပိုက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်။ မရနိုင်သောအမျှင်-ဒဏ်ရာပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။
ယခင်: Looper အနားကွပ်
နောက်တစ်ခု: FRP ultrapure ရေသိုလှောင်ကန်